China Diamond iko seramiiki hụrụ, iko malite ịgba, iko holw hụrụ, iko tapper, seramiiki onu hụrụ, marble oghere hụrụ factory na-emepụta | Boda
Diamond iko seramiiki hụrụ, iko malite ịgba, iko holw hụrụ, iko tapper, seramiiki onu hụrụ, mabul oghere hụrụ
BOSENDA iko onu hụrụ / iko oghere opener, arụ arụmọrụ arụmọrụ, mkpọpu ala isi jupụtara elu àgwà diamond ahụ, ngwaahịa imewe bụ ìhè-dara, na-egbusi na inogide isi, na mgbochi skid eyi na-eguzogide ọgwụ. O nwere njirimara niile nke iko iko igwe / seramiiki dakwasiri / seramiki oghere hụrụ.
A na-eji isi ihe dị elu gbasaa ma gbasaa emery, nke na-adịgide adịgide karịa ndị na-emeghe oghere. The pụrụ iche oghere imewe na nickel plating ọgwụgwọ na n'elu nwere ike belata ihe ndị na-eguzogide mgbe egwu na-eme ka slotting na mkpọpu ala rụọ ọrụ nke ọma. Na kachasị imewe nke mgbawa mwepụ uzo, mgbawa na slag nwere ike atara si mgbawa mwepụ uzo were were mgbe emeghe, na ike n'ụzọ dị irè dissipate okpomọkụ n'oge na-arụ ọrụ usoro.
Ihe gbara ya gburugburu na-adaba maka nkedo aka eletrik na vise. Nkọwapụta ngwaahịa ahụ zuru oke ma zute ihe achọrọ nke oghere dị iche iche
Ihu iko ahụ kwesịrị ekwesị maka imeghe oghere na ngwa ngwa na ihe siri ike dịka iko, taịliki seramiiki, brik na-egbuke egbuke, ihe mkpuchi, marble, wdg
Diamond bit na iko onu ire integrates elu uzu, na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ rụzuru na arụmọrụ. Nkenke mere, ibu eyi na-eguzogide, nkọ. Na-arụ ọrụ usoro, ọ nwere uru nke enweghị onu ida, elu na-agba na nkọ dịkwa mma s ọrụ-enyi na enyi.
Special malite ịgba: adabara-egwu ala iko, ceramik, n'ala taịl nile, wdg ndị cutter isi bụ oghere na mere nke emery. E nwere oghere na cutter isi mgbidi ikwado nhapu nke mkpofu ahihia. Okwesiri igwu ala oghere buru ibu.
Mara: tupu ojiji, gbaa mbọ hụ na edoziri kposara niile nke ngwaahịa a. Nke mbụ iji nwalee aka aka ọkụ iji hụ ma e debere agụba ahụ nke ọma, wee mepee oghere ahụ iji zere ọrụ na-ekwesịghị ekwesị.
Nke gara aga: 42 Bi-Metal Oghere hụrụ maka osisi metal, Olee hụrụ, Gypsum Board Plastic Iron efere Oghere Hụrụ, Metal Wood dakpuo, matel malite ịgba
Osote: Granite oghere hụrụ, sintered marble oghere hụrụ, nkume oghere hụrụ, diamond alloy cutter isi, oghere hụrụ, mabul nkpuchi, ihe dakpuo
42 Bi-Metal Oghere hụrụ maka osisi osisi, Olee otú hụrụ, Gy ...